#KeepItOn: Ny fiantraikan’ny fandraràna ny Twitter ho an’ny tanora Nizeriana · Global Voices teny Malagasy
“I had anxiety attack the day the news was announced.”"Tena nanahy mafy aho tamin'ny andro nanambarana ny vaovao,"
Voadika ny 09 Septambra 2021 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Español, Dansk, русский, Igbo, English
Fanoharana iray amin'ny fandrarana ny Twitter Nizeriana. Tovovavy Nizeriana ao ambadiky ny fefy vy. Sary avy amin'i Muhammadtaha Ibrahim Ma'aji, Pexels, azo ampiasaina malalaka.
Roa volana taorian'ny nanakatonan'ny governemanta Nizeriana ny Twitter, tanora tompona orinasa maro, ireo mpampita vaovao amin'ny tambajotra sosialy, ary ireo mpikatroka mafàna fo no voadona mafy, ary niresaka tamin'izy ireo momba ny fiantraikan'ny fandrarana eo amin'ny fiainany andavanandro sy ny orinasany ny Global Voices. Nampitombo ny ahiahin'izy ireo ny tahotra ny mety ho fanitarana ny fampiatoana ny sehatry ny tambajotra sosialy hafa toa ny Instagram.
Mbola nipoaka indray ny hatairana noho ny fandraràn'ny governemanta Nizeriana ny Twitter tamin'ny 4 Jona 2021. Noraran'ny governemanta Nizeriana ny sehatry ny tambajotra sosialy taorian'ny niheverana ny Twitter fa manimba ary nofafana ny sioka nataon'ny filoha Muhammadu Buhari izay nilaza fa hampiasa herisetra amin'ny foko Igbo ny fanjakana.
Nanomboka teo dia maro no nihevitra fa valifaty ho an'ny fanohanan'ny Twitter ny hetsika notarihin'ny tanora tamin'ny Oktobra 2020 #ENDSARS manohitra ny herisetra ataon'ny polisy ny fampiatoan'ny governemanta ny sehatra famahanana bilaogy madinika.
Vakio ihany koa: Social media became a life-saving tool for Nigerians. Now, they have to fight for it
Notoherin'ireo Nizeriana ny fandraràna tamin'ny alàlan'ny sioka niaraka tamin'ny tenirohy #KeepItOn (Aza tapahana). Ny fanentanana #KeepItOn dia fiaraha-mientan'ny fikarohana, fisoloana vava, fampitam-baovao ary fikambanana mihoatra ny 200, ao anatin'izany ny AccessNow, “any amin'ireo firenena miisa 75 manerantany, miady amin'ny famaranana ny fanakatonana ny aterineto manerantany.” Tamin'ny 26 Mey 2020, namoaka emoji manokana ny Twitter hanohanana ny fanentanana #KeepItOn:
Manantena izahay fa hamelona ny resaka momba ny ady amin'ny fanakatonana ny aterineto manerantany ny emoji #KeepItOn vaovao. Iraisan'ny rehetra ny maodely nataon'ny @AccessNow izay maneho ny fisokafana sy ny fankaherezana. Maneho taratra ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fidirana amin'ny aterineto izany.
Vakio ihany koa: Pejy manokana Global Voices — #EndSARS: A youth movement to end police brutality in Nigeria
‘Ny Instagram no mety ho manaraka’
Sokajin-tanora maro no voadona mafy tamin'ny famerana ny Twitter: ao ireo tanora mpandraharaha Nizeriana izay mivelona amin'ny sehatra amin'ny alàlan'ny fivarotana ny entany sy ny tolotra ataony; ireo izay mampiasa ny Twitter hihomehezana sy hihaonana amin'ny olona vaovao; ary ireo izay miankina amin'ny sehatra amin'ny resaka fisoloana vava.
Iray amin'ireo tompona orinasa Nizeriana toy izany ny tompona orinasa mivarotra firavaka iray monina any Lagos (tsy notononina ny anarany noho ny antony fiarovana) izay miankina amin'ilay sehatra hifaneraserana amin'ny mpanjifany. “Tena nanahy mafy aho tamin'ny andro nandrenesako ny vaovao,” hoy izy tamin'ny Global Voices.
Na dia manana kaonty Instagram ho an'ny orinasany aza ity tompona fivarotana firavaka any Lagos ity dia tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter-ny ny ankamaroan'ny varotra nataony. “Tena sarotra be ihany koa ny fahazoana mpanjohy ao amin'ny Instagram. Efa nanana mpanjohy miisa 400 aho ao amin'ny Twitter,” hoy ilay tovovavy 18 taona tamin'ny Global Voices.
Tsy manadino ity tompon'orinasa tanora ity fa zava-dehibe ary nanampy teo amin'ny sehatry ny varotra nataony ny fisehoana tao amin'ilay sehatra. Nanampy tamin'ny fahombiazany ho tompona orinasa manaraka ny fenitra ao amin'ny Twitter ny isa. Nolazainy ihany koa ny nahatonga ny orinasany lasa ampahany manan-danja amin'ny fiainany satria nanana zavatra atao nanokanany ny fotoanany sy nivoarany izy.
Ilay mpivarotra firavaka sy ireo Nizeriana hafa kosa dia mbola navitrika tao amin'ny Twitter na dia teo aza ny fandrarana, tamin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana VPN fialana amin'ny sivana. Na izany aza, tsy namaha ny olan'izy ireo ihany koa ny fampiasana ny VPN hidirana amin'ilay sehatra. Nampihena ny mpamaky sy ny tsenan'ireto tanora mpandraharaha Nizeriana ireto ny lalan'ny sioka nalefan'izy ireo nanerana ny firenena hafa.
Misy fiatraikany amin'ny paikady fahazoana mpanjifa marobe amin'ny fomba nomerika ity fandraràna ny Twitter ity, satria tsy tapahina intsony ho an'ny sehatra sosialy maro ny VPN ampiasain'ny olona.
Fandaniam-potoana fotsiny ny doka, tsy misy tombony mivaingana, anefa mbola misy ihany ny olona adala mihevitra fa mety izany. Ekena eh ?
Tsy vahiny amin'ny VPN ilay tompona fivarotana firavaka ao Lagos, niankina tamin'izany izy teo aloha mba hahazoana zavatra tsotra ho an'ny fahafinaretany toy ny fidirana amin'ny sarimihetsika amin'ny Netflix izay tsy misy any Nizeria. Nanandrana nampiasa izany izy avy eo mba hidirana tamin'ny Twitter. Nitaraina anefa izy fa mety hanahirana ny VPN satria miantraika amin'ireo fampiasa hafa toa ny Pinterest izay nanery azy hijery lahatsoratra amin'ny fiteny hafa.
Nahatsapa ny fandraràna ny Twitter ihany koa i Nwalema, tanora mpamorona lahatsoratra, mpanentana amin'ny tambajotra sosialy, ary mpilatro. Nifanakalo hevitra momba izany izy tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices. Toa voafehy mafy amin'ny “fitondrana jadona” ny firenena, hoy izy. Manahy izy sao ny “Instagram no ho manaraka” horaran'ny governemanta, na dia tsy nilaza aza ny governemanta fa handrara ilay sehatra. Manahy izy fa mety hiteraka fatiantoka ho azy sy ireo mpanentana hafa, indrindra ireo mpianatra izay mivelona amin'ilay sehatra ny fangatahana fahazoan-dàlana na ny fandrarana mihitsy ny sehatry ny tambajotra sosialy rehetra ao amin'ny firenena.
Ny sasany kosa mampiasa ny Twitter ho sehatra hanehoany ny heviny ara-tsosialy sy politika ary hitondra fanovana amin'ny alàlan'ny fanandrata-teny. Iray amin'ireo mpikatroka an-tserasera toy izany i Chisom Agbodike, mpianatra 19 taona mianatra any Ekiti any atsimo andrefan'i Nizeria. Niaro ny zon'ny LGBTQ + i Agbodike ary mampiasa ny sehatra hanehoana ireo fomba fijery ireo izy. Hatramin'ny nanombohan'ny fandraràna ny Twitter, tanora Nizeriana maro, anisan'izany i Agbodike, no nanjary kivy noho ny eritreritra mampiahiahy fa lasa tsirefesimandidy tsikelikely ny firenena izay mifanohitra amin'ny demokrasia.
Ohatra vitsivitsy ihany ilay tompon'ny fivarotana firavaka ao Lagos, Nwalema sy Agbodike amin'ireo tanora Nizeriana an-tapitrisany izay nahita vahaolana tao amin'ny tambajotra sosialy – na ho an'ny fialamboly fotsiny, na ho an'ny fampiakaram-peon'izy ireo, na ho an'ny fivelomana – ary ankehitriny dia feran'ny governemanta.
Azo antoka fa very fanantenana amin'ny demokrasia nolazain'i Nizeria fa ampiharina ny tanora marobe. Ho azy ireo, ny #KeepItOn no toa safidy tsara indrindra ho an'ny fahavelomany indray.
Ampahany amin'ny andian-dahatsoratra manadihady momba ny fisoloam-bava an-tserasera teo aloha sy ankehitriny ho an'ny fangaraharana, ny fandraisana andraikitra ary ny fitondrana tsara tantanan'ny tanora Nizeriana ity lahatsoratra ity. Ity tetikasa fanoratana ity dia ampahany amin'ny fampianarana Serasera Nomerika ho an'ny mpianatra amin'ny taona faharoa ao amin'ny Mass Communication, School of Media and Communication (SMC), Pan Atlantic University, Lagos, Nizeria. Ao anatin'ny fanofanana mikasika ny fanaovana tatitra momba ny zo nomerika sy ao amin'ny efitrano famoaham-baovaon'ny Global Voices ho an'ny mpianatra serasera manerantany ity tetikasa ity.